Amanzi&uthuli&abenzi-ziqinisekiso-ukubola-eTshayina Amanzi&uthuli&ababoneleli-zingqina-nokutya kunye neFactory
I-SFM(D)G- Amanzi&uthuli&ibhokisi yokuhambisa i-corrosion-proof (amandla).
7. Ukulayisha ngaphezulu, isiphaluka esifutshane kunye nokukhusela isiphaluka esilawulwayo kwaye sisebenzise njengento yokukhanyisa (amandla) kumgca wesebe ngalinye.
I-SFK-S-Water uthuli&ibhokisi yokulawula isiqinisekiso sokubola (indawo ebiyelweyo yeplastiki epheleleyo)
SFM series Amanzi-uthuli-proof cable-clamping isidibanisi D Uhlobo
1. Ubushushu be-Ambient yi: -25℃～55℃;
3. Ifanelekile ukusetyenziswa kwi-corrosion ye-asidi enzulu, i-alkali, i-ammonia, ityuwa kunye neklorini, amanzi, uthuli kunye ne-atmospheres emanzi;
4. Isetyenziselwa ukudibanisa umbhobho kwi-petroleum, ishishini lemichiza, ukutya, amayeza, iindawo zomkhosi kunye neendawo zokugcina.